न्युरोड : ५० वर्षमा जे हरायो- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
न्युरोड : ५० वर्षमा जे हरायो
काठमान्डुमा पाँच दशकअघि कुनै नेवारको आँगनमा उभिएर हेर्दा लहलह धानका खेत देखिन्थे । ती अब सम्झना–कथा बनिसके । सबै कथा भोलिको यादमा गएर बस्नेछन् । यहाँ याद राख्नुपर्ने धेरै विषय छन् ।
चैत्र २१, २०७७ ग्रेटा राणा
म पहिलोपटक २०२८, असार २० गते नेपाल प्रवेश गरेकी थिएँ । अबका केही महिनामा म नेपाल बस्न थालेको ५ दशक पूरा हुनेछ । यति लामो समय नेपाल बसूँला भन्ने सोचेकै थिइनँ । तर, बसेँ । त्यसमा मलाई कुनै पछुतो छैन ।
त्यतिबेला काठमान्डु कस्तो थियो ? काठमान्डु ‘वाइल्डेस्ट ड्रिम अफ क्यू’ मा उल्लेखित कवितामा वर्णन गरिएजस्तो थियो । त्यसैले यो ऐतिहासिक कालखण्डमा फर्किएझैं थियो । म दिल्लीबाट पुरानो नेपाली डकोटा चढेर त्रिभुवन विमानस्थल झरेकी थिएँ । सो विमानको ट्वाइलेटको फ्युसेलाजमा प्वाल परेको थियो । तैपनि त्यो सकुशल ल्यान्ड गरेका थियो । र, सबैजना ब्यागेज लिन तँछाडमछाड गरी दौडिएका थिए । त्यतिबेला पासपोर्ट हेर्ने, छाप लगाउने सबै काम मेरो ससुराले गरिदिनुभएको थियो ।
विमानस्थलबाट हाम्रो घर ‘एकान्तकुना’सम्म जाने एउटै मात्र बाटो थियो । त्यो निक्कै शान्त सडक थियो । अहिले त जाउलाखेल पनि कंक्रिटमा बदलिइसकेको छ । अझ धेरै मानिस यो क्षेत्रमा बसोबास गर्न चाहन्छन् । जब नवआगन्तुक मसँग ‘एकान्तकुना’ बस्छु भन्छन्, तब म भन्छु– होइन, म ‘एकान्त कुनामा’ बस्छु । कुनैबेलाको हाम्रो घरबाटै अहिले यो स्थानको नामकरण भएको छ ।
काठमान्डु त्यतिबेला शान्त–सुन्दर शहर थियो । मुख्यसडक त्यतिबेला न्युरोड थियो, अहिले मुख्य सडक दरबारमार्ग भएको छ । १९९० को भूकम्पपछि निर्माण भएको न्युरोड, जुद्ध सडक मलाई निकै मनपर्थ्यो । अहिले पनि त्यहाँको जुद्धको शालिक आकर्षक लाग्छ । स्थानीयले उतिबेला त्यसलाई भत्काएर ‘राणाकालीन शालिकहरूको चिहान’ मा मिल्काउन दिएनन् । जबकि धेरै शालिकहरूको अस्तित्व त्यहाँ मेटियो ।
न्युरोडको बायाँ कुनामा निकै चर्चित र लोकप्रिय पुस्टकारी पसल थियो । बच्चाहरूका लागि त्यो सबैभन्दा प्रिय स्थान थियो । उक्त पसलले आफ्नो मालिकलाई करोडपति नै बनायो होला । त्यसको छेउमा नेपाल घरेलु उद्योग थियो, जुन अहिले दरबारमार्गमा सरेको छ । उनीहरू तत्कालीन रानी रत्नको आभूषण बनाउँथे । त्यसैले पनि उनीहरू काठमान्डुका इलिटमाझ परिचित थिए ।
दायाँतर्फको सडकबाट अगाडि बढेपछि विश्वज्योति सिनेमा हल पुगिन्थ्यो र त्यसको कुनामा नेपाल कफी हाउस थियो, जुन अहिले छैन । कफी हाउस लेखक तथा कलाकारको झमघट हुने स्थान थियो, जहाँको समोसा र डोसा निकै मिठो हुन्थ्यो । हाम्रो परिवारकै लागि त्यो मनपर्ने लोकेसन थियो ।
न्युरोडको अर्को आकर्षण त्यतिबेला पीपलबोट पनि हो, जहाँ सबै प्रकारका पत्रपत्रिका तथा पञ्चायतविरुद्ध खासखुस गर्न मानिस जम्मा हुन्थे । त्यसैको पछाडि पुरानो खाली घर थियो । त्यहाँ न कोही बस्थ्यो न कोही छिर्थ्यो । सायद त्यो भूताहा घर थियो । अहिले त्यो पनि कंक्रिटमा परिवर्तन भएको हुन सक्छ ।
प्यानरोमा होटल न्युरोड खिचापोखरीमा थियो । र, गोरखापत्र संस्थानसँगै पारस होटल थियो । ती सबै होटल द्वारिकाका प्रणेता द्वारिकादास श्रेष्ठकै परिवारले सञ्चालन गर्थे । अमेरिकन लाइब्रेरी न्युरोड र खिचापोखरीको कुनामा थियो । मलाई लाग्छ, त्यतिबेला उक्त स्थान प्रेमिल जोडीको ज्ञानभन्दा बढी माया साट्ने थलो थियो । त्यो पनि अहिले हटिसकेको छ ।
अहिले न्युरोडमा पार्किङ पाउन युद्धै गर्नुपर्छ । गाडीहरूको समुद्र नै हुन्छ त्यहाँ । त्यतिबेला हरेक गाडी कसको हो भनेरै थाहा हुन्थ्यो । बालकृष्ण सम पुरानो फोर्ड चढ्नुहुन्थ्यो । तर, हेर्दा लाग्थ्यो त्यो गाडी डेट्रोइटको फ्याक्ट्रीबाट भर्खरै निकालिएको हो । हाम्रो एन्जिला भन्ने पुरानो फोर्ड गाडी थियो, जुन ब्रेक लगाएपिच्छे बिग्रिन्थ्यो र बीच बाटोमा गाडी रोकेर ठोकठाक गर्नुपर्थ्यो । अहिले त्यो स्थिति आयो भने के होला कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
उतिबेला पनि र अहिले पनि निकै चाखलाग्दो ठाउँ इन्द्रचोक हो । मुसलमान चुरा व्यापारीले उक्त स्थानलाई आफ्नो भनेरै दाबी गर्न थालिसकेका थिए । धेरै मानिसलाई उनीहरू भारतीय हुन् भन्ने लाग्छ । तर, त्यसो नभएर जंगबहादुरले इराकीहरूलाई शरण दिएका हुन् । उनीहरू काठमान्डुका इमाम पनि हुन् । प्रायको बसोबास क्षेत्रपाटीमा भए पनि हाल उनीहरू अन्यत्रै सरिसकेका छन् ।
अर्को चर्चित स्थान भनेको ब्रिटिस लाइब्रेरी थियो, जुन अहिले बेलायती राजदूतावाससँगै छ । मानिसहरू त्यसको सदस्यता रिसर्चका लागि भन्दा पनि शनिबार राजदूतावसको हलमा देखाइने फिल्मका लागि लिन्थे । त्यसबेला त्यो लाइब्रेरी निकै चर्चित थियो । त्यहाँ बहुचर्चित हास्यव्यंग्यकार सिड जेम्सले निर्माण गरेको ‘क्यारी अन’ सिरिज पनि प्रदर्शन हुन्थ्यो । हामी ‘क्यारी अन डक्टर’, ‘क्यारी अन नर्स’ र सबैभन्दा हास्यप्रद ‘क्यारी अन अप द खाइबेर’ हेर्थ्यौं । ब्रिटिसहरूले गरेको व्यंग्य अमेरिकीलाई पच्दैनथ्यो । गाईजात्राका बेला बेलायती राजदूतावासमा प्रदर्शनका लागि आएका कलाकार राजदूत र महारानीमाथि नै व्यंग्य गर्थे । उनीहरूले गरेको मिमिक्रीले अमेरिकनहरू चकित नै हुन्थे । त्यही कुरा यदि अमेरिकी दूतावासमा भए उनीहरूलाई बाहिरको ढोका देखाइन्थ्यो होला । जर्ज बर्नड शाले एकपटक भनेका थिए, ‘ब्रिटिस र अमेरिकीहरू अङ्ग्रेजी भाषाले छुट्याएको दुईवटा फरक जाति हुन् ।’ धेरैलाई यो गफै लागे पनि मैले यो भिन्नता धेरैपछि क्यानडामा देखेकी थिएँ ।
आज हामीसँग के छ त ? क्रंक्रिटको जंगल । भक्तपुरमा तैबिसेक विदेशी पैसाकै कारण भए पनि मध्यकालीन संरचना जोगिएको छ । काठमान्डुका धेरै स्थानका दरबारहरू भने राणाप्रतिको रिसले ध्वस्त बनाइए । सरकारी कार्यालयका रूपमा प्रयोग भएका केही संरचना मात्रै सुरक्षित छन् । सरकारले नै अन्य स्थानका पनि जिम्मा लिएको भए ती पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकसित हुन सक्थे ।
यो प्रसंग सम्झँदा मलाई भीमसेन थापाबाट राणाहरूले लिएको बागदरबारको चर्चा गर्न मन लाग्छ । त्यहाँ लुइस १४ औंको पालाको फ्रेन्च घडी देखेर म चकित परेको थिएँ । उक्त घडीलाई भर्सेलिजका शिल्पकारहरूले मात्रै सही अवस्थामा राख्न सक्छन् । सो घडी माकुराको जालोमा जकडिएको थियो । केशरमहल पछि सरकारले आफ्नो बनायो । नाटक देखाउन अत्यन्तै उपयुक्त स्थान हो केशरमहल । त्यहाँ मलाई ‘मच अडू अबाउट नथिङ’ वा ‘अल्स वेल द्याट इन्डस् वेल’ प्रदर्शन गर्न मन छ । हाम्रो आफ्नै स्ट्राटफर्ड अन एभिवन हुन्थ्यो । काठमान्डुका नवधनाढ्यहरूले अब कलामा लगानी गर्नुपर्छ ।
अर्को निराशाजनक विषय नारायणहिटी दरबार पनि हो । पुरानो दरबार अझ सुन्दर थियो । काठमान्डुमा रहँदा देखेको राजा वीरेन्द्रको गद्दी आरोहण पनि बिर्सन सकिँदैन । हामी त्यसबेला न्युरोडअघि नै पिकनिक गर्थ्यौं । त्यहीँ बच्चाहरूसँग खेल्थ्यौं । एउटा बच्चाले त्यसबेला हात्तीलाई नै राजा ठानेको थियो । त्यसपछि कोत छ सम्झनुपर्ने । बडादशैंको अष्टमीका दिन हुने राँगाको बलि हेर्न हामी कोत पुग्थ्यौं । सेनाका उच्च अधिकारीहरू आफ्ना पदक र पट्टाहरू पहिरिएर त्यहाँ उपस्थित हुन्थे । जात्राकै महोल हुन्थ्यो । जंगबहादुरको गुरुजु परिवारमा विवाह गरेकी एक मित्रले कोतमा पूजा हुँदा गगनसिंह भण्डारीले बजाएको घण्टी आफ्नो घरसम्म सुनिने बताएकी थिइन् । अहिले काठमान्डुको कंक्रिट जंगलमा के त्यो सम्भव छ ?
काठमान्डुमा पाँच दशकअघि कुनै नेवारको घरअघि आँगनमा उभिएर हेर्दा लहलह धानका खेत देखिन्थे । अब त ती सम्झना–कथा बनिसके । तर, आज यो लेख लेखिरहँदा ती सबै कथा भोलिको यादमा गएर बस्नेछन् । यहाँ याद गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । तर, हामीलाई धिक्कार छ– हामीले कंक्रिटको जंगल खडा गरेका छौं ।
प्रकाशित : चैत्र २१, २०७७ १०:०९